धुर्मुस सुन्तलीको आशुको नाटक र रंगशाला भात्काउछु भन्ने तारा बराललाई कस्ले दियो यस्तो चे’तावनी ? (भिडियो सहित) – Dainik Samchar
धुर्मुस सुन्तलीको आशुको नाटक र रंगशाला भात्काउछु भन्ने तारा बराललाई कस्ले दियो यस्तो चे’तावनी ? (भिडियो सहित)
March 27, 2021 415
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले सहयोग उठाउँदै रंगशाला निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ । क्रिकेट मैदान निर्माणमा आर्थिक अभाव भएपछि सहयोग जुटाउन सिताराम कट्टेल धुर्मुस मेची महाकाली अभियानमा निस्किएका छन् । रंगशाला निर्माणको लागि आर्थिक संकलन गर्न अभियानमा निस्कदा उनलाई रंगशाला निर्माणमै जुटेका मजदुरले विदाई गरेका थिए ।
उनीहरुले विदाईका क्रममा बाटोमा लाग्ने खर्च उठाएर धुर्मुसलाई दिएका थिए । यही बिषयमा पुन्य गौतमले धुर्मुस सुन्तली अर्थात सिताराम कट्टेल र कुन्जना घिमिरेको साथमा ख रो बो लेका छन हेरौ पुन्यले के भने भिडियो हेर्न यहा “>किलिक गर्नु होस
Prevइन्द्रेणीकि गायिका कल्पना दाहाललाई फेरी पिडा माथि पि’डा,आमा सि’किस्तै बिरामी..